Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Germany na-enweta ụtọ Seychelles ugbu a na mmemme anụ ahụ mbụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Atọ nke Seychelles na Germany
Ya na Constance Hotels, Raffles Seychelles na Condor ụgbọ elu, Njem nlegharị anya Seychelles kwadoro mmemme nri abalị ọnụ na Frankfurt maka ndị mmekọ ahia na mgbasa ozi. Ihe omume ahụ mepụtara ikpo okwu iji mee ka obi ike nke ndị njem na-ere ahịa na-ere ahịa na imelite ndị bịaranụ na ọnọdụ njem ugbu a.
Iji mee ka visibiliti nke ebe a na-aga, ọkachasị ndị mmekọ ahia na mgbasa ozi, na idobe paradaịs mara mma n'uche nke azụmaahịa njem German, ndị otu Seychelles Tourism na Germany gakwara ihe ngosi okporo ụzọ Expipoint na Nọvemba.
Ihe ngosi okporo ụzọ so na ụfọdụ mmemme anụ ahụ malitere n'ahịa German. Onye nnọchite anya njem Seychelles na Germany na Austria bụ Maazị Christian Zerbian nọchitere anya ebe njem ahụ na obodo German atọ dị na Berlin, Hanover na Cologne.
N'akụkụ ihe ngosi ndị ọzọ dị ka ebe njem, ndị mmekọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụgbọ elu Njem nlegharị anya nke Seychelles gosipụtara mmata okpomọkụ nke agwaetiti ndị a, na-ezubere iche ndị nwere ike ime ezumike n'oge oyi na ịkwado maka ndị bịarutere na afọ ọhụrụ.
Seychelles na-enye ahụmịhe njem na-enweghị nchekasị ma e jiri ya tụnyere ebe ndị ọzọ nwere ezigbo ntinye chọrọ n'ọnọdụ ya, dị ka ịpụpụ iche na mbata ma ọ bụ megharịa ule PCR ka ụbọchị ole na ole gachara.
N'igosi akara ngosi dị ịrịba ama nke mgbake nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ya, Seychelles edekọla ndị ọbịa 146,721 maka oge Jenụwarị 1 ruo Nọvemba 14, 2021.
Site na ngụkọta nke ndị ọbịa 14,090 dekọrọ afọ ruo taa, Germany nwere n'etiti ahịa isi mmalite atọ zuru ụwa ọnụ maka Seychelles n'afọ a.